Rin'i Nekuita nyore, chiitwa chekubata chinobata manzwiro akapfuma. Kuburikidza neTringi rinoridza, mugadziri anovavarira kuburitsa iyi inodziya uye isina chimiro nesando inotonhora uye yakasimba simbi. 2 curves yakabatanidzwa kuti iite rin'i inoratidza vanhu vaviri vanobata maoko. Iyo rin'i inoshandura chimiro chayo kana chinzvimbo chayo chakatenderera pamunwe uye chakatarirwa kubva kumakona akasiyana. Kana zvikamu zvakabatana zvikaiswa pakati peminwe yako, rin'i inoratidzika kunge yero kana chena. Kana izvo zvikamu zvakabatana zvakaiswa pane chigunwe, unogona kunakirwa nezvose zviri zveyero uye chena ruvara pamwechete.
Quaint and Quirky Cafe Yemukati Dhizaini Chitatu 19 Ndira
Aoxin Holiday Hotera Chipiri 18 Ndira
Superegg Kuisirwa Zvimwari Muvhuro 17 Ndira
Pendant Womenswear Muunganidzi Mutsipa Nemhete Dzakaiswa Rakadhindwa Machira Rin'i Rin'i